Eminyakeni yamuva, inani elandayo lezisebenzi baseRussia abaphethwe komzimba. Othile kuletha zonke kuhle buthule, uzizwa nje izimpawu kancane ungakhululekile. Kodwa kunabantu abanemizimba engezwani unamandla kakhulu. Kwesizini ukuthi, uma ukudla, ekhaya - inikeza abanye ukuhlupheka okukhulu. Ngesikhathi emakethe ekhemisi kukhona ezihlukahlukene omkhulu imikhiqizo, uhlushwa izimpawu komzimba. Ukuthuthukiswa yamuva lososayensi Kazakh "Antipollin" kobufakazi nesineke kakade wathola omuhle. Kulesi sihloko sizohlola izindlela ezingaphezu.
Kuyini yokungezwani komzimba?
Kwesinye isikhathi izinto ezejwayelekile kakhulu kungabangela emizweni ezingemnandi: uthuli izibungu, impova, isilwane dander. Yilokhu okubizwa ngokuthi i-njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile. Le mpendulo ezithile zomzimba egomekile. Izinto okuyinto ukwenza njenge izinto ezixabana nomzimba, obonwa izivikeli mzimba njengoba ezinenzondo alien. Njengoba Ukuvikelwa bukhipha amasosha omzimba okuyinto nokuxhumana nomzimba ukukhiqiza histamine. It is lokhu chemical kubangela izimpawu ezingemnandi: amakhala yisisu, amehlo zamanzi, sneezing, ukuminyana acinene, nokuningi. Ake sihlole kubo ngokuningiliziwe.
izimpawu yokungezwani komzimba
Allergy sisonke akubhekwa isifo. Noma kunjalo, ukubukeka kwayo, ngezinye izikhathi ingase yenze ukuphila kwethu ngaphezu kwamandla. rhinitis iguliswa kubonakala amakhala yisisu, sneezing njalo, ukulunywa ikhala. Phakathi nale nkathi, eziwohlokayo, uma usekhona ngokuphelele, ukuhogela. Kunesidingo ukugqoka iduku ephaketheni ngenxa yokugobhoza engalawuliwe kusukela ekhaleni. Ngokuvamile ahlupheke futhi amehlo Ukubhidliza, ububomvu, nezinkophe Ukulunywa kukhona kubuhlungu ngempela. Ngokuvamile yokungezwani komzimba wabonakaliswa pruritus kuze dermatitis. Isikhumba zingavela izindawo abomvu ezingonakalisa ukubukeka kwakho. Okuningi Ezimweni eziyinkimbinkimbi kubangele angioedema okuthiwa. Le nsizwa yayibonakala zigcwala, okubangela ukuvuvukala okunzima nezicubu ongama. Lokhu inkinga kungaholela kube ngisho nasekufeni, uma isikhathi akuthathi umuthi.
Komzimba zihlukaniswe unyaka wonke futhi zonyaka. Eyokuqala libhekene yokusabela kuya isilwane izinwele, uthuli izibungu, isikhunta isikhunta. Chaza i-njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile ezifana ulula: isimo lesiguli siba sibi endlini. Kungaba ngempela nzima, njengoba izakhiwo sichitha isikhathi esiningi. komzimba kwesizini yashubisa esikhathini zezimbali izitshalo. Ngokuvamile lokhu ekwindla, ihlobo spring. izimpawu Winter ukubaleka. Isikhathi sizwele isikhathi entwasahlobo - April no-May, lapho umfutho kuyinto Impova yezihlahla. Kusukela ngo-May kuya ku-August, uma iqala utshani zezimbali, kuza ihlobo komzimba. Ekwindla kuba impova yezimila ukhula, okuyinto allergen enamandla.
Ukuze lithole ukuthi ngasiphi uhlobo njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, vele uvakashele i Udokotela awe-aleji. Ngemva kokwethula phezu iqoqo ukuhlolwa ezithile, ungafunda kahle yini okufanele uyigweme. Akubalulekile uyephuza kulo mzuzwana - Eqinisweni, abanye abantu bathula nalo usizi lwabo iminyaka yokungezwani komzimba - ezihlukahlukene nezinkinga ezingase zibe ukulandela izimpawu zayo, ungase udale umonakalo omkhulu emzimbeni.
Lesi sidakamizwa yasungulwa ngo Kazakhstan abadumile usosayensi Udokotela awe-aleji Moshkevichem Viktor Semenovich. Iminyaka eminingi wayenesifo eyingoduso ocwaningweni imiphumela ubuthi bemisebe. Uthe yena nethimba lakhe waphawula isimo impilo abakhileyo Semipalatinsk esifundeni. Imiphumela yocwaningo lwalo eziye zafaka umfutho kuvalwe le sayithi esabekayo. Eyamsiza ukuba lezi zinto esikhathini esizayo, lapho livula igatsha Allergology. Kuyinto kule umnyango futhi kwadalwa "Antipollin".
Izibuyekezo izidakamizwa zokuhlola ngokushesha wathola omuhle kakhulu. isenzo sayo sisekelwe ezimisweni ezimbili: ezishukumisayo kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni, ukuze kwaba lula ukubhekana nale nkinga, kanye nokwethulwa "benecala" allergen. Ukwandisa lokuhlushwa izidakamizwa inkanuko emzimbeni "Antipollin 'kubangela nokuncipha ukuzwela kuwo. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba sifinyelele ukuthethelelwa esitebeleni. Dlulisa ejenti enqubeni uba ascorbic acid kanye talc.
"Mixed Antipollin": Izibuyekezo nesineke
Lokhu ukulungiselela iqukethe iqoqo nomzimba amaningi. izihlahla ezixutshiwe isetshenziswe ezigulini ezizwelayo ku-izihlahla zezimbali. Lokhu kujwayele ukwenzeka entwasahlobo. Okokuqala, udinga kudokotela uyofuna icebiso, uyolisingatha isifundo futhi zibeka ncamashi uhlobo imithi ezokwenza asebenza kangcono. "Izihlahla Antipollin Mitst", ukubuyekezwa zazo ezifakazela kahle yaso ephezulu, itholakala amafomu amabili: № 1 nenombolo 2. Ahluke ukubunjwa izinto ezixabana nomzimba, ngakho-ke kubalulekile ukucacisa kahle ukuthi imfuyo izenzo njengoba ecasulayo.
Izihlahla eziwuhlupho nathi
Iphakheji 1 zihlanganisa № birch, hornbeam, Alder ingcina futhi hazel ezivamile. Uma ukuhlaziywa ebonisa ukuthi umzimba wakho iyaphendula iguliswa enye yalezi izingxenye - nawe nakanjani kufanele athathe "Antipollin izihlahla ezixutshiwe." Nobufakazi, ngidla izidakamizwa eziningi ngokumelene komzimba kanye engakutholi impumuzo, bathi lo muthi waba yinsindiso yabo yangempela.
Inombolo iphakethe 2 uzothola insindiso yabo, nalabo abangakwazi ukubekezelela izimbali yesihlahla se-poplar abamnyama, esihlahleni se-okhi isiNgisi, Elm encane enezicabha futhi umlotha enezicabha maple. Futhi eziqukethwe okuxubile ukulungiselela kabili "Antipollin" esiliva birch. Izibuyekezo Udokotela awe-aleji ukunikeza ukuhlolwa omuhle izidakamizwa. Ngenxa yokuthi indlela yokwakheka-zonke zemvelo, awukwazi wesabe ukujwayela kuso. Landela imiyalelo ukusetshenziswa kwaso, futhi uzoba Ungesabi balinde kuze entwasahlobo.
Indlu yethu - enqabeni yethu. Ngakho bathi, labo abangekho iguliswa kuphela ngendlu uthuli. kuyakhungathekisa ukuza ekhaya, ngokwazi ukuthi noma yini ongayilindela ukuhlupheka, kunokuba ukuphumula. komzimba Professional yalolu hlobo wazi konke ngezimvu ezisindayo-duty-vacuum cleaner omkhathi, thatha ezinhlayiyeni ezincane ngothuli asakazeka emoyeni pair ekhethekile sekukubhubhisa, ngisho emoyeni. Mayelana bessulfatnye izimpushana, hlangothi ngenxa yokungezwani komzimba isikhumba. Kodwa kuyasiza isikhathi esifushane, njengoba uthuli inesimiso ezimbi ngokushesha uzovela futhi. Kulokhu, ungasiza "Antipollin House uthuli." Izimpendulo ezivela kulabo babe eminyakeni eminingi ukuhlupheka nkinga linabo ubufakazi okuyenga ukuthi kokuthatha lesi izidakamizwa kungaba isikhathi eside ngaphandle amaphilisi antihistamine ngisho ukulala elele phansi!
Umhlonyane - isitshalo elimnandi kakhulu. Abantu abaningi ngisho enjengayo kwamuncwa- iphunga ababayo. Kodwa hhayi labo komzimba okukhulu kudala. Tweaking ekhaleni, sikhale noma ukulunywa, ukuvuvukala, ungavumeli ukuba ujabulele zonke nezinjabulo zalokhu imbiza. Nokho, uma kungaba Udokotela awe-aleji abanekhono, ngubani uzokweluleka iziguli enjalo "Antipollin uMhlonyane." Izibuyekezo zalabo abaye Usuvele uzame lokhu umuthi uyophumelela ubabonisa umsebenzi wakhe omuhle kakhulu. cwaningo ephindiwe, anikele ngemva kweminyaka eminingana abaphathi, bonisa yokuntuleka pheze ephelele yokusabela kuya allergen ka-Artemisia. Khuluma nodokotela wakho bese uzama, mhlawumbe kuyokusiza?
Ezinye izici zomuthi "Antipollin"
Izibuyekezo uthola, futhi aqukethe amathiphu yokwamukela lokhu imithi. Ngezinye wathi ekhemisi amasayithi ebhokisini ngalinye yakhiwa 9 amabhamuza. Bakha izifundo kokuqala, eziyisisekelo nokusekela. Leli bhukwana likuchaza ngokuningiliziwe indlela ukuthatha "Antipollin" ngamunye wabo. Kubalulekile ukuqala ngesikhathi. Qalisa kudokotela ukuze kadokotela uma umzimba wakho uxabana ne in full bloom, akunandaba mqondo. Uyokwazi ukubhalisa ukwesekwa yakho noma nje ukhulula izimpawu izidakamizwa. Ukuze uvimbele ivela khona, kungcono ukuqala ukuthatha lo muthi ebusika. Khona-ke umzimba, uthole umthamo ezithile izinto ezixabana nomzimba, isikhathi baphinde bawahlanganise bese uthole yokuvimbela yaso kwaze kwaba seqophelweni lapho ziyofundiswa khona ngokuziphatha eziqhakaza nemvelo.
Komzimba ngokuvamile iphoqa iziguli ukuthi ziphuze semali izidakamizwa. Abanaso njalo ukusiza. "Antipollin" Izibuyekezo okwathi nakuba intsha yayo isihlobo, isivele siqine emkhakheni "kuhle" futhi kube "kuhle kakhulu", hhayi kuphela ukukusiza ubhekane nezingcindezi izimpawu zesifo, kodwa kuzophinda nqanda them uma kusengaphambili uqale ukuphuza lokhu imithi . Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo ipumelelo ososayensi ukuze abafowethu bathole lula izifo zabo!
Acetylsalicylic acid - izinkomba ngoba
Wamafutha Kuhle kusukela nemivimbo hematomas: amathiphu kanye nokubuyekeza
Indlela yokwenza ishidi lokukopela lisheshayo, kulula futhi lingabizi.
Ukwenza ngaphandle uphethiloli ugesi ngezandla zabo
Inkanyezi enamaphoyinti ayisithupha: Inani. izimpawu zenkolo yobuJuda neyalabo abazibiza
Semi-othomathikhi Welding bodywork: ukubuyekezwa, izithombe, izincazelo
Udweba kanjani owayebulele ngepeniseli. Udweba kanjani owayebulele Ezio